Xog: Dawladda Somalia oo ka been sheegtay Duqaymaha Drone-ska fuliyaan, iyo USA oo arrintaas ka fiirsanaysa. – Hornafrik Media Network
tan iyo wixii ka dambeeyay markii loo doortay Madaxwaynanimadda Somalia, Maxamad C/laahi Farmaajo waxay Somalia qaadatay Siyaasad ku salaysan Buun buunin iyo Xayaysiin mararka qaarkood u muuqda in laga badaniyo Halbeegii saxda ah, Waxayna Dawladdu aad u isticmaashay Baraha Bulshadda oo ay Run iyo Beenba ku kasbatay Taageerayaal u arka inay tani tahay Dawlad Shacab maadaama ay la wadaagayso wax kasta.
Duqaymaha ay fuliyaan Diyaaradaha aan Duuliyaha lahayn ee Maraykanka ee loo yaqaan Drone-ka ayaa ka mid noqday waxyaabaha loo isticmaalo Xayaysiinta, Waxaana tiro ka dhawr jeer laga maqlay Warbaahinta ama lagu arkay Baraha Bulshadda Dawladda Somalia oo sheeganaysa in Madaxwaynuhu amray Duqayn lagu dilay Horjoogayaal Alshabaab ah, taasoo ah mid ka fog xaqiiqda.
Sideey ku ogaataa Dawladdu Duqaymahan,?
Maraykanku marna kama tala galiyo Dawladda Somalia ka hor intaysan dhicin Duqaymuhu, lalamana wadaago Xogta ku aadan goobta la weerarayo, Waxaana Maraykanka u qaabilsan Hawlahan Xafiiskooda Sirdoonka Somalia oo diyaariyo goobta la duqaynayo, kuna xira Qalab haga Drone-ka iyagoo kaashanaya Shaqsiyaad Soomaali ah oo laftigoodu ay xakamaysan yihiin Macluumaadka ay heli karaan.
Waqtigii uu Madaxwaynaha ahaa Xasan Sh ayeey Dawladdu dalbatay in laga tala galiyo Weeraradda lala beegsado Alshabaab, Waxaana dood dheer kadib la isla oggolaatay in marka uu Weerarku dhaco isla markiiba la soo wargaliyo Dawladda, balse aysan Dawladdu la wadaagi karin Warbaahintooda, taasoo meesha ka saartay Cabashadii Dawladda ee ahayd inay ka maqlaan Weeraradaasi Warbaahinta Maraykanka, iyagoo ah Masuuliyiintii Somalia.
wixii Waqtigaasi ka dambeeyay mar kasta oo uu dhaco Weerar duqaymo ah waxaa lala wadaago weerarka kadib 2 Xafiis oo ka tirsan Dawladda Somalia, kuwaasoo kala ah Xafiiska Madaxwaynaha Somalia, iyo Xafiiska Taliyaha Nabadsugidda Somalia, iyadoo aysan ku jirin xittaa Xafiisyadda Xogtan lala wadaago Xafiiska Raiisul Wasaaraha.
inkastoo lagu heshiiyay inaysan Duqaymahan la wadaagin Dawladda Somalia Warbaahinta haddana ballankaasi way ka baxday Dawladdu, waxayna u isticmaashay Duqaymahan Xayaysiin, iyadoo markiiba soo saarta Warsaxaafadeed ay ku sheeganayso in Madaxwaynaha Somalia uu amray Weerarkaasi.
Maxaa ka dhashay Sheegashadda Somalia,?
Sheegashadda Somalia ee Weeraradda Drone-ka waxaa ka dhashay in Taliska Afrika ee Maraykanka ay soo saaraan Warsaxaafadeed u muuqda inay ugu jawaabayaan Dawladda Somalia, iyagoo sheegay in Duqaymahan uu amray Madaxwaynaha Maraykanka Bishii March ee Sannadkan, kaasoo soo saaray Qaraar lagu fasaxayo in la bartilmaameedsado Hogaamiyayaasha Argagixisadda, iyadoo Nuxurka Jumladaasna ay tahay in Madaxwaynaha Somalia uusan wax tallo ah ku lahayn Weeraradan.
Sidoo kale Taliska Africom waxay ka fiirsanayaan Wadashaqaynta ay la lahaayeen Xafiisyadda Dawladda Somalia oo ay wargaliyaan Weeraradda marka ay dhacaan kadib, maadaama ay Xogta ay la wadaageen u isticmaalaan si qaldan, Waxaana laga yaabaa in laga joojiyo Macluumaadka lala wadaagi jiray.